Dagaalka Itoobiya: Sawiro iyo muuqaalo been abuur ah oo ay dad badan run u qaateen |
Boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay labadii toddobaad ee uu dagaalka u dhaxeeya Milatariga Itoobiya iyo xoogagga Tigrey uu ka socda gobolka ku yaalla waqooyiga Itoobiya ee Tigrey.
Xilli uu dagaalka sii xoogeysanayo ayaa waxaa ay dadka qaar isku dayayaan inay baahiyaan warar been abuur ah iyo macluumaad marin-habaabin ah oo dagaalka ku saabsan.
Ma jiro Sawir uu rai’sul wasaaraha ku galay furunta dagaalka
Waxaa sawirkan uu u muuqdaa rai’sul wasaaraha Itoobiya Ahmed oo xiran dariiska ciidamada, islamarkana ku hadlaya telefoon, waxaana lagu baahiyay mid ka mid ah cinwaanada facebook ee lagu taageerro ciidamada federaalka iyo howlagaladooda Tigrey.
Waxaa muuqata saddex sawir oo rai’sul wasaaraha ku saabsan, islamarkana waxaa la iskula wadaagay in ka badan 1,000 mar.
Waxaa sawirkan la soo galiyay cinwaanka magaca Taye Dendea Aredo, oo ah afhayeenka xisbiga haya talada dowlad deegaanka Oromiya, Balse sawirkani waa mid been abuur ah.
Baaritaan aan ku sameynay sawirkaasi aya muujinaya in sawirka midka uu teleefoonka ku hadlayo uu yahay mid hore loo isticmaalay taasi oo ahayd sheeko ku saabsanayd ciidamda Mareykanka.
Waxaan raadinay sawirka asalka ah oo ah midka imika aad kor ku aragtaan kaasi oo ah askari Mareykan ah oo ku hadlay taleefoon isaga oo dariiskiisa xiran.
Sawir been ah oo ku saabsan diyaarad dagaal oo soo dhaceysa
Muuqaal muujinaya diyaar dagaal oo ay Itoobiya leedahay oo la soo riday, islamarkana burburtay, muuqaalka ayaa si wayn loo baahiyay iyada oo lagu andacoonayo in diyaaradu duqeyn ka fulinaysay gobolka Tigrey.
Balse sawirka waa mid xaqiiqada ka fog islamrkana uu muuqaalkani ka yimid barnaamijyada ciyaaraha Komputarada ee loo yaqaano Arma.
Waxaa sidoo kale muuqaalada la baahiyay ka mid ah diyaarad uu dab qabsaday kaasi oo ah mid sax ah, balse aan ka dhicin dalka Itoobiya.
Baaritaan aan sawirka ku sameynay ayaa waxaa lagu ogaaday in la qaaday sanaddii 2016, uuna ahaa muuqaal laga duubay diyaarad nooca F-16 oo cilad ay ku timid dalka Urdun.
Sawirada ka yimid meelo kale oo aan Itoobiya ahayn
Waxaa jira sawiro badan oo la baahiyay kuwaasi oo ah sawiro marin-habaabin, islamarkana ku saabsan weeraro dhacaya iyo kuwa muujinaya weerarka ka dib.
Qaar ka mid ah sawiradani ayaa ah kuwa hore oo dalal kale ka dhacay, balse dib loo jarjaray si looga dhigo inay yihiin dagaalka imika Itoobiya ka socda.
Bar facebook oo ciidamada dowladda fedaraalka ee Itoobiya lagu taageero ayaa waxaa lagu baahiyay sawiro horey looga soo qaaday dalka Uzbekistan.
Sawirada ayaa waxaa ka mid ah mid muujinaya diyaarad gantaal tuureysa taasi oo loo isticmaalay baraha bulshada iyada oo laga dhigayo duqeynta ka socota gobolka Tigrey.
Balse marka aad si dhaw u fiiriso ayaa waxaa kuu muuqanaya in diyaaradan uu ku xardhan tahay calaamada ciidamada cirka ee Uzbekistan ee “Uz Air Force”.
Sawirkan ayaa waxaa marki ugu horeysay baraha internetka lagu baahiyya bishii January ee sanadkan.
Balse qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa isticmaalay sawirkin marin-habaabinta ah iyaga oo ka dhigaya weeraradii ay xoogagga Tigrey ka geysteen magaalada Bahir Dar ee gobolka amxaarada.
Sawirkan kore ayaa xaqiiqadiisu waxay tahay in uu ahaa qarax ka dhacay goob la dhigo waxyaabaha Kimikada oo ku yaala magaalada Tianjin ee dalka Shiinaha, waxaa uuna qaraxan dhacay 2015.
Balse waxaa sawirkan imika loo isticmaalay in uu yahay dagaalka ka socda dalkaItoobiya.
Mid ka mdi ah dadka isticmaala Facebook ayaa baahiyay muuqaalkan isga oo sheegaya in uu yahay weerarkii ay xoogagga Tigrey ku qaadeen magaalada Casmara.
Wuu jiray weerar ay dhawaan xoogagga Tigrey ay ku qaadeen magaalada Casmara, balse ma jiro muuqaal laga hayo weerarkaasi .
Mid ka mid ah cinwaanada barta Facebook ayaa waxaa la soo dhigay muuqaal laga dhigay in uu yahay wax si toos ah loo tebinayo , balse ah muuqaal soo noqnoqonaya oo marka uu dhamaadaba dib isu soo celinaya.
Balse muuqaalkan oo la isla wadaagay wax ka badan 1,000 jeer ayaan gabi ahanba ahyan mid ka yimid dalka Eritrea, islamarkana waxaa muuqaal laga duubay weeraro gantaal oo ay Iiraan ku qaadeen saldhig uu Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq bishii January ee sanadkan.